U8818 G300 တွေ Ginger Bread တွေသုံးမနေနဲ့တော့ ICS ကိုပြောင်းလိုက်တော့နော်……….. : Myanmar Mobile Software Developer
U8818 G300 တွေ Ginger Bread တွေသုံးမနေနဲ့တော့ ICS ကိုပြောင်းလိုက်တော့နော်………..
September 10, 2012 | 16 Replies
အလွယ်ဆုံးသော Fimware တင်နည်းတွေထဲမှာ ပါတဲ့ Huawei တွေ ပဲ ကိုင်လိုက်ပါ။
ကဲ ဒါလေးတွေ Download ဆွဲ လိုက်ပါ။
2ခုလုံးဆွဲပြီးရင်တော့ အပေါ်က Zip ကို Extract လုပ်ပါ။
Auto 2ဖိုင်လုံး Extract သွားပါလိမ့်မယ်။
ပြီးရင် ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်လိုက်ပါ။
Update Keyလို့ပဲခေါ်ရမှာပဲ (Volume Down + Volume Up +Power) ကို
မတွေပဲ Huawei Logo တက်လာရင် Battery ဖြုတ်ပြန်နှိပ်ပါ။
Update လုပ်နေရင်းနဲ့လဲ Update Failed ပေါ်ရင် Battey ဖြုတ်ပြန်နှိပ်။
အကုန် Backup လုပ်အုံးနော်။
Contacts,Message,Call logs တွေပျက်မှာစိုးရင် Back up လုပ်နော်…
မသိရင်လဲပြောပါ။ Back up Software တင်ပေးပါ့မယ်။
OK ပါစေ နော်။
ပြီးရင် Root လုပ်ပြီး မြန်မာဖောင့် ထည့်လိုက်တော့နော်….
Developer option ထဲက USB Debugging ကို အမှန်ခြစ်ပါ။
Unknown Source ကို အမှန်ခြစ်ပါ။
ဒါလေးကို Download ဆွဲပါ။
ပြီးရင်တော့ Extract လုပ်ပြီး computer မှာ
ပြီးရင် Huawei Driver ထည့်ရဦးမယ်နော်….
ပြီးရင် Unlockbootloader.exe ကို Run လိုက်ပါ။
ဖုန်းကို ဒီအတိုင်းပဲ USB ထိုးပြီး Computer နဲ့ချိတ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် UnlockBootloader ထဲ က Root ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Auto Run ပြီး Unlockbootloader ကြီးပျောက်သွားတဲ့အထိ
ထိုင်စောင့်ပါ။ပြီးရင်တော့ ကြည့်လိုက် အစိမ်းရောင် အရိုးခေါင်းလေးတွေပြီပေါ့။
မေးလိမ့်မယ် Super User request နော်
Myanmar Font ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်။
ဒီ Zip ဖိုင်လေးဆွဲလိုက်နော်။
Folder တစ်ခုထဲမှာ apk ၂ဖိုင်တွေလိမ့်မယ်။
ဖုန်းထဲမှာ Install ဆွဲပါ။
Zawgyi font changer ကိုဝင်ပြီး ပထမစာကြောင်းကို ရွေးပါ။
Super Uesr Request ကို Allow ပေးလိုက်ပါ။
Auto Reboot ကျသွားပါလိမ့်မယ်။
ပြီးရင်တော့ Keyboard လေးပြောင်းလိုက်တော့နော်။
အားလုံးအဆင်ပြေပါစေနော်….။ U8818D အတွက်ကတော့ မထွက်သေးပါဘူး။ထွက်ရင်တင်ပေးပါ့မယ်။
ဒီ Post လေးကို နတ်မောက်မှာ Diploma In Computer Studies တက်တုန်းက ခင်တဲ့ ဘော်ဒါအတွက်ပါ……
Category: Firmware တင်နည်းများ, Root လုပ်နည်းများ
စွန်လွတ်သူဆိုတာ သူ့ကို ဘယ်သူကမှ မကြည့်ချင်နေပါစေ
kyaw kyaw says: October 3, 2012 at 8:25 am ကျေးဇူးပဲအကိုရေ…… အကို u8661 ကိုကော် အဲလို လုပ်လို့ မရဘူးလား…
Reply ဖြိုးချမ်း says: October 3, 2012 at 8:38 am U8661 ကတော့ 2.3 မှာပဲဆုံးသွားပါပြီ။
သူအတွက် Offical ထက်မထွက်တော့ပါဘူး….. Reply shaddylay says: October 15, 2012 at 7:44 am ဒေါင်းလွတ်ဆွဲလို့မရတော့လို့ ကူညီပါအုန်း
Reply joker says: October 15, 2012 at 7:48 am down လို့ မရတော့ပါဗျ
Reply ဖြိုးချမ်း says: October 15, 2012 at 7:52 am ရပြီအစ်ကိုတို့ရေ…အသစ်ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်…..
Reply kyarpauk says: October 22, 2012 at 4:11 am part2ပဲတွေ့တယ်ဗျာ…part 1 ကဘယ်ရောက်သွားတာလဲမသိဘူး..ကူညီပါဦး
Reply Pyae PHyo says: November 20, 2012 at 9:32 am Hello Bro,
My phone is U8818.
I wanna downgrade to 2.3.6 original firmware.
Now, I’m upgrade 4.0 official firmware B926
I haveaproblem “Update Failed” appear my phone U8818,
Reply ဖြိုးချမ်း says: November 20, 2012 at 9:42 am Bootloader unlock လုပ်ပြီးဆင်းပါ..
Reply zahtetni says: November 20, 2012 at 4:12 pm အကို Huawei Ph တိုင်းက ဒီနည်းအတိုင်းဘဲ firmware upgrade လုပ်ရတာလား (မသိလို့မေးတာပါနော်)
Reply zahtetni says: November 20, 2012 at 4:15 pm အကို part2ဘဲ တွေ့ တယ် part 1 မရှိဘူး
Reply moon says: February 16, 2013 at 1:21 pm ကိုဖြိုးချမ်းခင်ဗျား၊ ကျွန်တော်မှာ Huawei v4.0.3 B926 ကို မြှင့်လိုက်ပါတယ်။ cwm recovery ကို ဘယ်လိုမှ
သွင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ CWM recovery installer နှင့် cwm တင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ Failed ဖြစ်သွားပါတယ်။ တခြားဆိုက်(မြန်မာ) ကလည်း သွင်းပါတယ် မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်က JB 4.1.2 rom ကို တင်ချင်လို့ပါ။ ဒီ JB V4.1.2 rom ကို cwm recovery တင်ပြီးမှ recovery ကနေ zip ဖိုင်ကို install update လုပ်တာ မဟုတ်လား ခင်ဗျား။ cwm recovery သွင်းပြီးမှ ဒီ 4.1.2 ကိုတင်ရမှာဆိုရင် cwm recovery လေးက်ို ကူညီပေးပေါဦးခင်ဗျား။ ကိုဖြိုးချမ်း Huawei ဖုန်း 12 လုံးအတွက် firmware တင်ရင် update fail ဖြစ်မှာ မပူနှင့်တော့။ ဒီမှာလာပြီ Huawei stock Recovery Installer နှင့် CWM recovery တင်လို့ ရလားခင်ဗျား။
Reply ko naing says: April 8, 2013 at 11:45 pm Ascend G300-U8818 (Android 4.0) V100R001C17B926(China Unicom)
Reply ko gyi says: April 23, 2013 at 2:22 pm အားလုံးပြီးသွားပါပြီ ဒါပေမယ့် ဇော်ဂျီ ဖောင့် ကခုထိ auto reboot လုပ်နေတယ် ဘယ်လိုကြောင့်လဲမသိဘူး
Reply ko gyi says: April 23, 2013 at 2:29 pm reset ကျမသွားဘူးဗျ
Reply moonmoon says: September 16, 2013 at 4:22 pm huawei U8818 ကို ICS တင်ပြီးသုံးနေတာ ကြာတော့ကြာပါပြီ လွန်ခဲ့တဲ့ တလလောက်က သမီးလေး ဂိမ်းဆော့နေရင်းနှင့် ပါဝါကျသွားပြီးပြန်ပီ ပါဝါဖွင့်လိုက်တော့ firmware ကျသွားတာတွေ့လို့ ပြန်ပြီးfirmwareပြန်တင်လိုက်ပါ ပါဝါကို ဖွင့်ထားရင်းနှင့် auto ပါဝါပြန်ပိတ်သွားပြန်တယ် ပါဝါပြန်ဖွင့်တော့ ဖုန်းက firmware ပြန်ပြုတ်ကျနေပြန်တော့တယ် firmware B926 v 4.0.3 ပါ။ နောက်တော့ firmware ပြန်တင်တော့ step2failed ဖြစ်သွားပြီးတော့ recovery mode ဝင်လို့မရ vol
Reply moonmoon says: September 16, 2013 at 4:41 pm huawei U8818 ကို ICS တင်ပြီးသုံးနေတာ ကြာတော့ကြာပါပြီ လွန်ခဲ့တဲ့ တလလောက်က သမီးလေး ဂိမ်းဆော့နေရင်းနှင့် ပါဝါကျသွားပြီးပြန်ပီ ပါဝါဖွင့်လိုက်တော့ firmware ကျသွားတာတွေ့လို့ ပြန်ပြီးfirmwareပြန်တင်လိုက်ပါ ပါဝါကို ဖွင့်ထားရင်းနှင့် auto ပါဝါပြန်ပိတ်သွားပြန်တယ် ပါဝါပြန်ဖွင့်တော့ ဖုန်းက firmware ပြန်ပြုတ်ကျနေပြန်တော့တယ် firmware B926 v 4.0.3 ပါ။ နောက်တော့ firmware ပြန်တင်တော့ step2failed ဖြစ်သွားပြီးတော့ recovery mode ဝင်လို့မရ vol up +vol down + power key လည်း တွဲနှိပ်ရင်လည်း ဘာမှမပေါ်တော့ပါဘူး။ power supply နှင့်ချိတ်ကြည့်လိုက်တော့ power မတက်တော့ပဲ amp 0.5 လောက်သာ ဆွဲတင်သွာပါတယ် dead boot ဖြစ်သွားတလား ဘယ်လို လုပ်ရင်အဆင်ပြေမလဲ